Ubhekana nokuxoshwa uma ubhikisha uphethe isikhali - Bayede News
Ukhala ngamaqiniso achezukile uShenge ngokulandiswa kukasomlando
Akungabazeki ukuthi isinqumo seNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala Ezisebenzi sizoguqula ukwenzeka kwezinto uma kunemibhikisho yezisebenzi.
Mhla zili-13 kuMbasa wezi-2021 le Nkantolo ikhiphe isinqumo sokuthi izisebenzi eziphatha izikhali ezifana nezinduku zegalofu uma ziteleka zibe zazi ukuthi lokhu kuphambene nemigomo yenkampani, zifanelwe ukuxoshwa.
Inkampani eseNew Germany, KwaZulu-Natal, ebizwa ngokuthi iPailpac yaya enkantolo emveni kukoxosha inqwaba yezisebenzi zayo ezaba yingxenye yesiteleka zihlome ngezikhali embonini yensimbi nobunjiniyela esasihlelwe yiNational Union of Metal Workers of South Africa (Numsa) ngoNtulikazi wezi-2014.
Emagcekeni ale nkampani kunezimpawu ezigqamile nezicacisayo ukuthi akukho emthethweni ukuthi izisebenzi zingene esitelekeni zihlome ngezikhali.
Ekuqaleni, umxazululi emkhandlwini wokuxoxisana ngezithinta izisebenzi wathola ukuthi ukuxoshwa kwalezi zisebenzi, zonke ezazingamalungu eNumsa, kwakungalungile wayalela ukuba zibuyiselwe emsebenzini.
Lezi zisebenzi zaxoshelwa ukungaziphakathi kahle ngenxa yokuphatha izikhali ezifana nezinduku, izimvubu, izinduku zegalofu nokunye ngesikhathi ziteleka.
IPailpac lezi zisebenzi yazibeka icala ngaphansi komgomo wayo wokuziphatha, iBreaches of Discipline, ngokuphakamisa izikhali ngesikhathi sesiteleka.
Lezi zisebenzi zalahlwa yicala ngasinye kwabe sekuphakanyiswa ukuthi zikhonjwe indlela. Le nkampani yabe isizixosha zonke.
Umxazululi emkhandlwini wokuxazulula ezezisebenzi wathi lokhu kuxoshwa kwakungalungile ngoba kwakungeke kwashiwo ukuthi izisebenzi zazazi ngomthetho owawuzivimbela ukuba ziphathe izikhali ngesikhathi sesiteleka.
IPailpac yasiphonsela inselelo lesi sinqumo yathi singabuyekezwa, yabe isiya eNantolo Yezisebenzi eyayichitha.
Emveni kwalokho le nkampani yadlulela Kweyokwedluliswa Kwamacala Ezisebenzi. Lapha yayimi kwelokuthi kwakucace bha ukuthi inomthetho okubekayo ukuthi abateleki “ngaso sonke isikhathi kumele baziphathe ngendlela enokuthula”.
Yathi bangaziphatha izingqwembe, bakhuze iziqubulo, bacule futhi badanse kepha abavumelekile ukuvimba amalungu omphakathi, ezinye izisebenzi okanye abahlinzeka inkampani ngemisebenzi ethile ukuba bangene emagcekeni enkampani noma baphazamise ukusebenza kwenkampani okwejwayelekile, benze izenzo ezingekho emthethweni noma ezinodlame.
Le nkampani yaphinde yakucacisa ukuthi alukho uhlobo lwesikhali okwakufanele luphathwe ngabatelekayo.
UMehluleli uFayeeza Kathree-Setiloane uthe ngokobufakazi, imithetho yayibekwe yacaca ebhodini lezaziso esangweni elikhulu lokungena emagcekeni ale nkampani, ngalapho izisebenzi zazithikitha khona uma zingena noma ziphuma emsebenzini.
Uthe uma ezinye izisebenzi zakwazi ukuya odongweni olungase sangweni ziyofunda imithetho yokuteleka, ngakho nalezi ezaxoshwa nazo kwakufanele ngabe zakwazi ukukwenza lokho kwazise wawufakiwe umbhalo owawunxenxa zonke izisebenzi ezazitelekile ukuba zibuyele emsebenzini.
UMehluleli uthe ubufakazi buveza ukuthi empeleni lezi zisebenzi zaya ukuyofunda umyalezo owawunamekwe odongeni ngakho-ke zaziwazi umthetho noma zazilindelwe ukuthi ngabe ziyawazi.
Uqhube wathi noma yimuphi umqashwa ocabanga kahle uyazi ukuthi ukufika nesikhali emsebenzini ngeke kwamukeleka.
“Ukwenza lokhu kwabe kuwukungawuhloniphi umthetho ocacile wasendaweni yokusebenza ovimba ukuziphathi okufana nalokhu ngesikhathi sesiteleka. Umphumela wokwephula lo mthetho ukuxoshwa emsebenzini,” kusho uMehluleli.
INumsa iveze ukuthi izosiphonsela inselelo eNkantolo YoMthethosisekelo lesi sinqumo yabe isinxusa amalungu ayo ukuba angaziphathi izikhali uma eteleka kuze kube lolu daba lufinyelela emaphethelweni.
Okushiwo ngalesi sinqumo
Isazi somthetho uMnu uPatrick Deale sithi lesi sinqumo siyoba ngesifanele uma kunobufakazi obukhombisayo ukuthi ukhona kulaba ababeteleka owasebenzisa izinduku ngendlela esabisayo nenenhloso yokulimaza.
Uthi lokhu kungaba ngokwehlukanisa lowo muntu kwabanye ababeviliyela ngazo ngendlela engasabisi.
UDeale uthi ngokoMthetho Wezikhali Eziyingozi uNombolo 15 wezi-2013, “isikhali esiyingozi” sisho “into, ngaphandle kwesibhamu, engakwazi ukubulala noma yenze umonakalo emzimbeni uma isetshenziselwa inhloso okungeyona eyomthetho”.
Uthi iSigaba 2(1) sithi uMthetho awusebenzi kokuningi okufaka phakathi ukuphatha isikhali esiyingozi ngenhloso yokwenza umsebenzi osemthethweni.
“Lokhu kusho ukuthi ukuphatha induku engasetshenziswa ukulimaza ngesikhathi sesiteleka kahle hle akulona icala. Kodwa, iSigaba 3(1) sithi ukuphatha isikhali esiyingozi, njengenduku ngesikhathi sesiteleka, ngaphansi kwezimo ezingavusa ukusola ukuthi osiphethe uhlose ukusisebenzisela “…inhloso engekho emthethweni, kuyicala…”
ISigaba 3(2) sicacisa ngezimo okufanele zibhekwe ukuthi ngabe umuntu uhlose ukusebenzisa isikhali ngenhloso engekho emthethweni. Lokhu kuhlanganisa isikhathi nendawo lapho lo muntu etholakala khona, indlela aziphethe ngayo, indlela isikhali esiphethwe ngayo nesibonakala ngayo nezinye eziningi,” kusho uDeale.
Uthi uma Inkantolo Yokwedluliswa Kwamacala Ezisebenzi, ebufakazini obuyiqiniso kuleli cala, izibonile lezi zimo (okukhulunywa ngazo ngenhla) ezikhombisa inhloso yokusetshenziswa kwezikhali ezaziphethwe yizisebenzi ngenhloso engekho emthethweni, isinqumo sayo singesilungile.
Uma zingekho lezi zimo, iNkantolo YoMthethosisekelo ingafinyelela esinqumweni esehlukile.
nguSabelo Mbatha Apr 30, 2021